‘स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छु’ - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ पालिका स्वास्थ्य ∕ ‘स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छु’
हेल्थ आवाज मंगलबार, २०७८ असार १ गते, १०:०१ मा प्रकाशित
मोरङको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका नगरपालिका हो–पथरीशनिश्चरे । यस नगरपालिकामा करिब ८० हजार जनसंख्याको बसोबास छ । साविक पथरी, शनिश्चरे र हसन्दह गाविसलाई मिलाएर नगरपालिका बनाएको हो । संघीय नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत विकासका कामहरु स्थानीय तहले गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्योजन गरिएको छ । नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ । मोरङको मुख्य सहरमध्ये एक पथरीशनिश्चरे नगरपालिका मेयर दिलिपकुमार राईसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कामहरु, आगामी स्वास्थ्य योजनालगायतका यावत विषयमा केन्द्रित रहेर हेल्थ आवाजको लागि प्रदेश १ का संयोजक अनिल श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कसरी काम गर्दै आउनुभएको छ ?
नगरपालिकाले स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ । अहिले ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक विरामी भएर अस्पताल जानुपरेको अवस्थामा नगरपालिकाले निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाएको छ । ८० वर्षभन्दा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई दुई महिनामा एक पटक स्वास्थ्यकर्मीहरुले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण घरमा गर्दै आएका छौं । मिर्गौला, क्यान्सर, मुटु, बोनम्यारो, स्पाइनलकड इन्जुरी, अल्जाइमर, पार्किन्सन्सजस्ता रोगहरु लागेर उपचाररत बिरामीहरुलाई सहयोग स्वरुप एकपटक १५ हजार खर्च पनि नगरपालिकाले दिदै आएको छ । नगरवासीको सहज स्वास्थ्य उपचारको लागि नगरपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा लागिरहेको छ ।
१८ करोड ६८ लाख दुई हजार रुपैयाँको बजेटमा १५ शैथ्याको पथरी शनिश्चरे नगर अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसीआर) को सहयोगमा ८० लाखको बजेटमा त्यहाँ अर्काे भवन पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ । शनिश्चरेमा नयाँ स्वास्थ चौकी भवन बनेको छ । हसन्दहमा पुरानै स्वास्थ्य चौकी भवन छ । नगरको ३, ६ र ७ नम्बरमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन सम्पन्न भएको छ । यसको अलावा १, ४ र १० नम्बर वडामा पनि स्वास्थ्य केन्द्र बनिरहेको छ । दुई वटा स्वास्थ्य चौकी, सात वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, १६ वटा खोप क्लिनिक, १२ वटा गाउँघर क्लिनिक छन् । यहाँ ३० जना स्वास्थ्य स्वयंसेविका रहेका छन् । पथरी बजारमा तीन वटा निजी अस्पतालहरु सञ्चालन हुँदै आएको छन् । स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम चलिरहेको छ ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको रोकथाम र नियन्त्रणमा नगरपालिकाले कसरी काम गर्दै आएको छ ?
नगरपालिका भित्रका ६२ देखि ६४ वर्षका ज्येष्ठहरुमा ९७७ जनाले कोभिड–१९ विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन् । कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारको लागि नगरपालिकाले पथरीशनिश्चरे २ मा १५ शैय्याको आइसोलेसन बनाएको छ । नगरले संचालनमा ल्याएको आइसोलसनमा प्रत्यक्ष रुपमा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा संक्रमितको उपचार हुनेछ । यहाँ पर्याप्त अक्सिजन छ । नगर अस्पतालमा सञ्चालित आइसोलेसनका लागि हालसम्म अत्याधुनिक ३ र अन्य २६ गरी २९ वटा अक्सिजन सिलिण्डर छ । अक्सिजन आवश्यक पर्ने विरामीलाई यही आइसोलेनमा उपचार हुने गरेको छ । थप उपचार गर्नुपर्ने विरामीलाई झापा, मोरङ र सुनसरीको ठूला अस्पताल पठाउने गरेका छौं ।
दुई हप्ता अगाडिदेखि यो आइसोलेसन संचालनमा आएको हो । यसलाई आवश्यकताअनुसार विस्तार गरिनेछ । सुरूवाती चरणभन्दा अहिले कोभिड–१९ संक्रमण घटदो क्रममा छ । निको हुने संक्रमितको संख्या पनि बढदै गएको छ । त्यही भएको कारणले थप आइसोलेसन बनाउनुपर्ने अवस्थामा देखिएको छैन । संक्रमित थप उपचारको लागि ठूलो अस्पतालमा पु¥याउनुपर्ने अवस्थमा आएमा त्यस्ता विरामीको लागि नगरपालिकाद्धारा संचालित तीन वटा एम्बुलेन्स छन् । यो एम्बुलेन्सले विरामीलाई निःशुल्क रुपमा हस्पिटलसम्म पु¥याउने गर्दछ ।
स्थानीय तहले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी अभाव खेपिरहेको छ । पथरीशनिश्चरेले जनशक्तिको कसरी व्यवस्थापन गरेको छ ?
नगर अस्पतालमा २ जना एमबीबीएस डाक्टरसहितका स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गरिएको छ । हामीले उहाँहरूलाई करारमा नियुक्त गरिएको हो । जुन एउटा अवधिभरको लागि काम गर्नुहुन्छ । आवश्यकताअनुसार थप गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । स्वास्थ्यकर्मीसँगको सम्पर्कमा रही ३० जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका पनि सेवारत हुनुहुन्छ ।
अहिले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिएको छैन । १० वटा वडा रहेको नगरका सवै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा पुग्ने क्रममा भवनहरु बन्दैछन् । ९ नम्वरको शनिश्चरेमा स्वास्थ्य चौकी, ५ नम्वरको हसन्दहमा स्वास्थ्य चौकी, १ नम्बरको पथरी र ३ नम्बरको किराँती चोकमा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छ । १० नम्वरको ऐयावारीका साथै अन्य वडामा गरी ५ वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, १६ वटा खोप क्लिनिक, १२ वटा गाउँघर क्लिनिक छन् । यी सबैमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले बिरामीलाई सेवा दिदै आउनुभएको छ ।
स्वास्थ्यका कार्यक्रम गर्ने क्रममा प्रदेश सरकार र संघीय सरकार साझेदारी गर्दा जटिलता आए कि आएनन् ?
हाम्रो अपेक्षाअनुसार बजेटको पाटोमा खासै सहयोग भएको छैन । यद्यपि, हामीले योजना बनाइरहेका छौं । हरेक वडामा स्वास्थ्य पहुँचमा नागरिकलाई जोडन लागि परेका छौं । संघीय सरकारले १५ शैय्याको अस्पताल निर्माणको लागि केही बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
त्यसबाहेक अरु कुनै थप सहयोग भएको छैन । प्रदेश सरकारले केही स्वास्थ्य सामाग्रीबाहेक अरु कुनै अहिलेसम्म सहयोग आएका छैन । स्थानीय सरकारलाई प्रदेश एवं संघीय सरकारको सहयोग हुँदा परिणाम राम्रो आउने भएकोले हामीहरुले हरेक कार्यक्रममा सधैं जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौं । कोभिड–१९ को सुरुमा नै प्रोटोकलमा नहुँदा पनि संघ र प्रदेशले गर्ने काम पनि गरिरहेका थियौं । कोभिड–१९ को पहिलो लहरको समयमा संघ र प्रदेश समन्वय गरेर काम भएको थियो । दोस्रो लहरमा अपेक्षा गरेजस्तो सहयोग आएको छैन । नगरपालिकाले आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर संक्रमण रोक्न काम गर्दै आएको छ ।
नगरपालिकाले स्वास्थ्यलाई कुन प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ ?
समुदायको क्षेत्रमा रहेर भन्नुपर्दा नगरपाकिाले स्वास्थ्यलाई अहिले पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्दै आएको छ । अब आर्थिक वर्षको लागि नगरपालिकाले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि स्वास्थ्यलाई प्राथिमकता राखेर काम गर्नेछ ।
नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दासम्म पथरीशनिश्चरेको स्वास्थ्यलाई कहाँ पु¥याउने लक्ष्य छ ?
हाम्रो समय सकिएर आउने नेतृत्वलाई हामीले छोडेर जादै गर्दा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन हुनेछ । जस्तै यस नगरपालिका भित्र १५ शैय्याको नगर अस्पताल हुन्छ । हामी आउँदा स्वास्थ्य चौकीहरु मात्र थिए । सबै वडाहरुमा स्वास्थ्य केन्द्र रहेको छ । हामीले छोड्दै गर्दा स्वास्थ्यमा यहाँका नागरिकले पनि धेरै परिवर्तन भएको अनुभूति गर्ने विश्वास दिलाउँछु ।
क्याटेगोरी : पालिका स्वास्थ्य, प्रदेश १